Ciidamada Yuhuuda oo soo qabtay Falastiiniyiin ka baxsaday Xabsi | HalQaran.com
Home Caalamka Ciidamada Yuhuuda oo soo qabtay Falastiiniyiin ka baxsaday Xabsi
Ciidamada Yuhuuda oo soo qabtay Falastiiniyiin ka baxsaday Xabsi
Israel (Halqaran.com) – Booliiska Israa’iil ayaa qabtay saacadihii hore ee Sabtidii laba kale oo Falastiiniyiin ah oo ka baxsaday xabsi ammaankiisu aad loo adkeeyay horaantii toddobaadkan, taasoo ka dhigaysa Afar tirada maxaabiista dib loo soo celiyay.
Mas’uuliyiinta ayaa aqoonsaday labada qof ee kala ah Zakaria Zubeidi iyo Mahmoud al-Arida.
Labadan qof ayaa la sheegay in laga helay garaashka xamuulka ee waqooyiga Israel.
Mas’uuliyiinta Israa’iil ayaa laga soo xigtay warar sheegaya in Zubeidi uu isku dayay inuu iska caabbiyo xarigga.
Laba qof oo kale oo Falastiiniyiin ah ayaa weli baxsad ah.
“Maxaabiista ku jirta xabsiyada Falastiin waxay u ooman yihiin xorriyad. Waxay rabaan inay noloshooda ku noolaadaan. Ma aha dambiilayaal caadi ah, laakiin waa waddaniyiin u dagaallamaya xorriyadda, ”ayuu Muhammad Khabe oo ka tirsan Falastiiniyiinta u sheegay Al Jazeera.
“Israa’iiliyiintu waxay xabsi geliyeen Falastiiniyiin iyagoo qabsaday dhulkoodii. Markay reer Falastiin hubka qaataan, adduunku wuxuu noogu yeeraa argagaxiso markaan hubka dhigno ee aan si nabad ah iska caabbinno, Israa’iiliyiintu way na dilaan, ”ayuu raaciyay.